घर » रक्षा » Tomb Defender
खेल जानकारी: Tomb Defender
विवरण: ड्रेकुला एक हप्ताको लागि घर पछि हेर्न एक सहायक भाडामा लिएको। तपाईंको मुख्य कार्य अवान्छित पाहुनाहरूलाई खडा र चिहानमा जस्ताको तस्तै राख्न छ
खेल्नु: 27,617 ट्याग: युद्ध खेल
बेन 10 युद्ध मा
यो लाश Pleasantville हमला गर्दै छन्! Luckily, हाम्रो triggerhappy नायक को प्रेत भीड हटाउन वर्तमान छ। बन्दुक को4विभिन्न प्रकार र आफ्नो thrusty Chainsaw संग undead खतरा पूर्ववत गर्नुहोस्। लहर पछि लहर बच्न, आफ्नो दर्जा वृद्धि र तुलना
werewolf वेम्पायर युद्ध
दुवै werewolf र पिशाच सबै गाढा दौड हौं, तर तिनीहरूलाई बीचको सम्बन्ध धेरै खराब छ। दुवै पक्ष कहिल्यै मनोवृत्ति जीवित पिशाच र Werewolves को वातावरण सानो रही छ, मानव को संख्या contact.With मा लिन
अराजकता को लिग
युद्ध अन्त्य गर्न मानिसजातिको लागि आफ्नो समय युद्ध मानिसजातिको अन्त राख्दछ अघि। लिगका अस्तव्यस्त एक नियंत्रणीय र प्रगतिशील नायक वर्ण र विज्ञान-विषय संग एक sideview रणनीति खेल हो।
, युद्ध क्षेत्र र बर्बाद शहर र गोप्य सैन्य आधारमा गर्न ट्रपिकल वन बाट चर्किरहेको 16 तबाही र हत्याकाण्ड को स्तर मार्फत आफ्नो बाटो गोली। आफ्नो टीम, धोका र Hunted को एकमात्र बाचेको व्यक्ति, यो जिम्मेवार एक मानिसहरू तल ट्र्याक गर्न सम्म छ
मशरूम को लडाई
, विजय तपाईंको मशरूम नेतृत्व enemie गरेको घरहरू, कटेज र गगनचुम्बी भवनहरू विजयी। रक्षा बीजाणु टावर नियन्त्रण लिन! शत्रु पुरातन shroom जादू प्रयोग पराजित गर्न, acorns संघर्ष, सैन्य बुट र आकास बाट बिजुली हडताल महसुस!
, भवन कब्जा गर्न सिक्का कमाउन, शत्रु एकाइहरु मार्न, र शत्रु महल नष्ट मध्ययुगीन एकाइहरु प्रयोग गर्नुहोस्।
आँधी संचालनका 2
को आक्रमणकारिहरुमा आफ्नो सैन्य आधार लिन नदेऊ। marksmanship देखाउने र शत्रुहरू संग गरिन। तिनीहरू मरूभूमिमा आउने र सबै लागत मा जीत गर्न चाहनुहुन्छ हुनुहुन्छ। यो हुन नदिनुहोस्
अत्यधिक प्रशंसित महाकाव्य युद्ध श्रृंखला गर्न sequel आइपुगेको छ! महाकाव्य युद्ध 5, अद्वितीय कथा तीन नायक 30 एकाइहरु, 70 कौशल, र 30 सहायक विशेषताहरु। संघर्ष 12 मुख्य चरणमा मार्फत संसारको अन्त हुनेछ भन्ने Hellsgate आफ्नो बाटो, र 8 extr
रोबोट योद्धाहरू लग इन को एक खेल मा क्लिक गरेर सुरु गर्नुहोस्। त्यसपछि, तपाईँको नाम टाइप गरेर एक नयाँ प्रोफाइल सिर्जना गर्नुहोस्। मिशन 1 क्लिक पहिलो स्थानमा खेल सुरु गर्न। त्यसपछि छड्नुहोस् विज्ञापन मद्दत मा क्लिक गर्नुहोस्। रोबोट योद्धाहरू अगाडि राक्षस मार्ने
को हट एयर बेलुन प्रत्येक क्षेत्रमा गाह्रो पहेली समाधान। छनकहरू लागि राम्ररी हेर।
यो आकास हलो
हाम्रो नायक पायलट, विंग कमाण्डर पादरी, फेरि शत्रु encampment मा एक सफल छापे पूरा गरेपछि शत्रु क्षेत्रमा असहाय छ। पहिले अज्ञात ene नष्ट हुँदासम्म शत्रु मार्फत उहाँलाई उड एचएमएस Tally Ho मा भूमि क्षेत्र कब्जा
बेलायत को लडाई
तपाईं आफ्नो देशबाट ठूलो हावा शक्ति पायलट छन्। अनुभव र तयारी अभाव छैन। यस कारण तपाईं आक्रमण विमान छिमेकी देश अतिक्रमण बाट देश को airspace रक्षा गर्न बोलाए गरिएको छ। तपाईं युद्धमा हुनेछैन
रोबोट को युद्ध
रोबोट पृथ्वीमा लिएका छन्। यो फेरि पृथ्वीमा लिन रोबोट हटाउन आफ्नो कार्य हो। तपाईंले तिनीहरूलाई पिट्न पर्याप्त बलियो हुनुहुन्छ?
राक्षस ersan बनाम हतियार नायक
यो नि: शुल्क अनलाइन कार्य खेल मा आफ्नो हतियार नायक प्रयोग गरेर राक्षस Ersan नष्ट!
तपाईं Dristen, एक कातिलों हालै पुनःस्थापित परमेश्वर, भियलनेबुला को इच्छा पूरा गर्न बस्छ छन्। को Slayers फिर्ता उद्धार र प्रवेश प्राप्त गरेपछि Dristen अब assassinating लक्ष्य फिर्ता तहगत प्रणाली माथि आफ्नो बाटो काम गर्न भियलनेबुला threa पाता छ
ढोकाहरू मा आदिवासीहरूले
एक रक्षा बाधा निर्माण र तपाईंको राज्य बाहिर आदिवासीहरूले प्राप्त! archers लेना वा Cannons किन्न, आफ्नो दायरा र गति वृद्धि, बाल्न वा आफ्ना शत्रुहरूलाई स्थिर विशेष सीप खरीद। आदिवासीहरूले त्यसैले नयाँ रणनीति प्रयास गर्नेछ आफ्नो गार्ड नदेऊ तल maje
युद्ध मा बमवर्षक
को ककपिट मा hop र यो निःशुल्क अनलाइन खेल शूटिंग मा खराब मान्छे बम खसाल्न!
तपाईं मर्मत वा हरेक स्तर अघि आफ्नो ट्यांक स्तरवृद्धि गर्न प्राप्त। अपग्रेड थप्न-आफ्नो ट्यांक मा नयाँ र थप शक्तिशाली हतियार स्थापना हुनेछ! प्रत्येक मिशन58 दुनिया समावेश। तपाईं संसार नाश गर्दै हुनुहुन्छ भने, तपाईं सारा मिशन AGA बारम्बार हुनेछ
रातो बेलुन पप आफ्नो तोप प्रयोग र नष्ट हुनबाट नीलो बेलुन मुक्त गर्न।